wararka maanta-arlaadii.net » 2017 » October » 7
Akhriso: Guddiga dib u eegista dastuurka ee Baarlamaanka oo ka horyimid Shirka Arrimaha Dastuurka.
Guddiga Madaxa Banaan Ee Dib u Eegista Dastuurka iyo Guddiga Dib u Eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka soo horjeesteen shirka Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ay qorsheysay inuu ka furmo magaalada Muqdisho maalinta Axada ee ku beegan 08-10-2017. Guddoomiyaha...
Daawo Xildhibaan C/weli Qanyare “Khayre wuxuu isku dayay in uu Burburiyo Galmudug Balsa uma suurta galin”
Xildhibaan C/weli Qanyare, Khayre wuxuu isku dayay in uu Burburiyo Maamulka Galmudug Balsa uma suurta galin oo hantidii Qarankana musuq maasuq baa loo adeegsaday. halkan hoose ka daawo hadalka Xildhibaanka oo dhameystiran
DAAWO Faysal Cali Waraawe Oo Mutacalimiinta Isaaq La Dulmaray Kabaha!!!
C/rashiid Xidig “Villa Soomaaliya Waxa ka taliyan shaqsiyaad Dalkana maaha mid Hal Xisbi maamula”
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in dowladda Federaalka inay ka gaabisay xal u helida arrimaha ka jira dowlad goboleedyada, isagoo dhanka kale ku eedeeyay inay sii hurineyso khilaafyada ka jira maamulada qaar. Xildhibaanka oo ka qeyb galayay Barnaamijka Faaqidaada...
Maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee koonfur Galbeed, Hirshabeele, Jubbaland, Puntland iyo Galmudug, ayaa si wada jir ah u qaadacay inay ka qayb galaan shir looga hadlayo arrimaha Dastuurka Soomaaliya, kaasi oo sida la qorsheeyay maalinta bari ka furmaya Muqdisho. Warar kalo...
Waxaa maalmihii dambe socdo ololihii ugu weynaa ee lagu doonayey in meesha looga saaro dhammaan Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya ka jiro, wuxuuna ololahaas kasoo bilowday Hirshabelle oo lagu guuleystay iyo Galmudug oo hadda meel xasaasi ah mareyso. Haddaba baaritaan iyo xog...